Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile » Chile na -amalitegharị maka ndị njem nlebara anya nke ọma
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
A ga -ebulite kwarantaini maka ndị njem mba ofesi gbaa ọgwụ mgbochi ọ bụla ma ọ bụrụ na nsonaazụ ule PCR ha mere mgbe ha rutere Chile adịghị mma.
Ịbanye na Chile nwere ike site na ọdụ ụgbọ elu atọ nke Iquique, Antofagasta, na Arturo Merino Benítez.
Tupu ha abata na mba ahụ, a ga -ekwenye na ọgwụ mgbochi nke gọọmentị mmadụ natara ka enwere ike ịnye paspọtụ ngagharị na Chile.
Ndị mmadụ anaghị agba ọgwụ mgbochi (ya mere enweghị ike itinye akwụkwọ maka ngafe ngagharị) ka ahapụbeghị ka ha bata n'obodo.
Ndị ọrụ gọọmentị Chile kwupụtara na malite na Nọvemba 1, 2021, a ga -ebuli iche maka ndị njem mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla ma ọ bụrụ na nsonaazụ ule PCR ha mere mgbe ha rutere. Chile adịghị mma.
A ghaghị ịgba ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma, a ga -amatakwa ọgwụ mgbochi ọrịa na Chile.
Ihe ntinye ndị a chọrọ dabara na ozi ugbu a:
Banye n'ime Chile nwere ike site na ọdụ ụgbọ elu atọ nke Iquique, Antofagasta, na Arturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Tupu ha abata na mba, ekwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi nke gọọmentị mmadụ nwetara ka enwere ike wepụta paspọtụ ngagharị (pase de movilidad) site na. Chile. Ngwa maka ịmata ọgwụ mgbochi ọrịa dị n'ịntanetị.
Dejupụta mpempe akwụkwọ elektrọnikị "Nkwupụta nke Onye Njem" ruo awa 48 tupu ịbanye, nke ị ga -enye ozi kọntaktị gị, ahụike na akụkọ ebe. Mpempe akwụkwọ a ga -agụnye koodu QR dị ka ụzọ nkwenye. Enwere ike mezue ya na ntanetị (ụdị Bekee dị).
Ndị njem na -abanye na Chile ga -enwerịrị mkpuchi ahụike njem nke ga -ekpuchi $ 30,000.
Ihe akaebe nke ule PCR na -adịghị mma were awa 72 tupu ịbanye. A na -eme ule PCR ọzọ n'ọdụ ụgbọ elu na Chile.
A na -eme nnwale PCR n'ọdụ ụgbọ elu na -aga na Chile. Ndị mmadụ na -abata na obodo ahụ ga -eji ụgbọ njem nkeonwe gaa ebe a kapịrị ọnụ ọnụnọ site na ntinye wee chere ebe ahụ maka nsonaazụ PCR (oge ruru awa 24). Ọ bụrụ na nnwale ahụ adịghị mma, ịpụ iche ụbọchị 5 anaghị emetụta.